Chikunguru 2018 - Network maRadio
musha / 2018 / Chikunguru
Mwedzi: July 2018
Chii chakamboitwa nevaRoma kwatiri?
Ah! Tambo isingafi kubva kuMonty Python!
Zvakanaka pakati pezvakawanda zvakagadzirwa, izvo zvakaitwa nevaRoma kwatiri kwaive kutsanangudza nzira yedu.
Shanduko mukugadzirwa kwemugwagwa
Kunaka anoziva kuti migwagwa yaive yakaita sei maRoma asati auya netekinoroji yavo itsva kutakura, asi zvinoita sekunge vangangodaro vasina kana kumbotwasuka!
VaRoma vakanzwisisa zvisinei kuti nzira inokurumidza kubva A kuenda B yaive munzira yakatwasuka; ndosaka zvisaririra zvemigwagwa yavo ichipfuura-kuyambuka Europe, kunyangwe kana paive nemakomo munzira, saka zvinoita.
Zvino chii chiri pasi pano chiri G7DDN chiri kuitika nezve izvozvi? Akapedzisira arasikirwa nemamabhero ake? Zvakanaka pamwe iwe unofunga kuti ini ndatova ne (!), Asi kushamisika, ini ndinoona yakafanana pano neNetwork maRadio.
Rega nditsanangurire ...
Ipo Amateur Radio paive pakazara, "makwikwi" akadai sezvaaive, aive asina basa uye aisakosha.
Kufona kune dzimwe nyika kwaidhura zvakanyanya; Ham Radio yaikodzera kupinda mukati kana chete kubva pakuona kwemari, asi zvakare wakave nemufaro wekutumira masaini pasirese…
CB redhiyo yaive, muUK zvirinani, kutanga zvisiri pamutemo, uyezve, kana zvave pamutemo, zvakaganhurirwa ku11m FM uye 4 watts kuburitsa - hapana kana chinhu chingaita hanya nezvekuti rinotevera rinhi 10m Ham Band raigona kuendesa 400 watts eSSB kana CW.
446MHz rezinesi yemahara pa500mW yanga isingaenzane ne70cms ine simba re400 watts uye vanodzokorora uye satellites.
Ichi ndicho chimwe chikonzero Hams asina kutora mafoni avo nemasaini ku11m uye 446MHz semuenzaniso. Kuita izvozvo hakuna kuita zvine musoro.
Iyo Nzira Yeasina Kushora
Vanhu vakasununguka vakatora "nzira yekushomeka kushoma" - zvishoma senge maerekitironi!
Dambudziko muna 2018 nderekuti kune "makwikwi" ezvekuvaraidza uye mukwikwidzi mukuru wepfuti!
Iyo internet inobvumidza chero munhu, pasina muripo, kupenda vhidhiyo kufona pasirese.
Iwe unogona kufungidzira mwana wako ane makore gumi nemana ekuberekwa kana muzukuru achiita izvi, apo iwe ungangodaro ugere mumusha wako, uchigunun'una pamusoro pekushaikwa kwemamiriro pane 14m kana kushomeka kwechiitiko pa20MHz.
Zvinoshamisika here kuti vanhuwo zvavo havawani "Ham Radio muna 2018?
Izvo zvavanoita, sesu tese, zvinotevera nzira yakapusa yekuita kuti basa riitwe.
Inokura uye inokura…
Iye zvino kukura kwesangano reNetwork Radios pasi rese kunoshamisa, asi padanho rimwe chete hazvishamise.
Zviri, pakupedzisira, neNetwork maRadio, asingarwadzi kuita macontent pasirese, chero mamiriro eIonosphere.
Mushure mezvose kana iwe uri kushandisa iyo Internet sekuparadzira pachinzvimbo, haufanire kunetseka nezvezvinhu zvakaita seK-Index kana iyo mamiriro ezuva reespot. (Kunakidzwa asi izvo zviri pachazvo!)
Uye ini handisi kushora "yetsika" Ham Radio munzira; Ndichiri kuishandisa nguva dzose.
Zvandiri kutaura ndezvekuti iwe haugone kupa mhosva vanhu nekufamba "yakatwasuka nzira", iyo nzira yekushomeka, kana zvechokwadi izvo zvavanoda kuita kutaurirana nevamwe-vane pfungwa redhiyo vanofarira.
Zviri nyore kwazvo!
Mushure mekunge ndapa hurukuro paRadio Network pane kirabhu nguva pfupi yadarika, mumwe murume akati, "Zvakanaka, izvi zvese zvakanaka, asi dambudziko nderekuti, zvese zviri nyore!"
Ichokwadi zvakakwana - asi izvo zvakakwana chikonzero chekuzviramba?
Dzimwe nguva, mune chero chekuvaraidza, hatidi kuti zvinhu zvive nyore zvishoma?
Hakusi kuchovha bhasikoro mamaira matanhatu pabhasikoro rako reDutch kuti uone shamwari yako neChitatu shanduko yakanaka kubva ku6km sprint yaunoita Mugovera wega wega pabhasikoro rako rekumhanya nekirabhu yako yemuno?
Icho Chinhu Chakareruka
Dzimwe nguva, ini ndinoda kutaura neVK zviteshi paNetwork Radios, pane kuti ndirare husiku hwese kuyedza kuvashanda kwenguva pfupi pa80m.
Hongu pane kunakidzwa kuita izvo zvisingakwanise kuve neNetwork Radios, asi kune zvakare kugutsikana kunouya nekuita shamwari dzenhepfenyuro muAustralia newandinogona kugara ndichitaura - uye iwe hautore izvozvo pa80m.
Izvo zvinongova "mabhiza emakosi".
'Zvese uye', kwete 'zvimwe kana'…
Hapana-mumwe ari kuratidza kuti Network maRadio achatsiva echinyakare Ham Radio - kutaura chokwadi haigone kuzviita.
Asi, iwe unoziva, hapana-ini wandinoziva ari kunyatsoratidza izvozvo.
Hongu, chitsva (-ish), hongu zvakasiyana, ehe zviri nyore, uye neguamu, zvinonakidza here!
Uye, kunze kwekunge ndakanganisa, vanhu vanotora hobho kuti vafare, pamusoro pezvose.
Uye ini handioni chakaipa pane izvozvo!
Mufananidzo chinyorwa: Wikimedia Commons